Fampiharana tena ilaina 4 hampiasaina amin'ny Xiaomi Mi Band | Androidsis
Ny Xiaomi Mi Band dia nanolotra ny taranany vaovao herinandro vitsivitsy lasa izay, ny fahefatra hatreto. Ity taranaka vaovao ity dia miaraka amina endrika vaovao sy fiasa fanampiny, izay azo antoka fa tena tian'ny mpampiasa erak'izao tontolo izao. Ho fanampin'izay, ny fandefasana azy nitranga tany Espana ihany tamin'ny farany. Mba hanararaotana ny fehin-tànana, mpampiasa maro no mampiasa rindranasa.
Noho izany, etsy ambany izahay dia mamela anao miaraka amina andianà fampiharana izay afaka mahazo bebe kokoa amin'ny Xiaomi Mi Band anao. Tsy maninona izay taranaky ny fehin-tànana anananao, satria azonao atao ny mampiasa ireo rindranasa ireo amin'ny fotoana rehetra. Safidy tsara handinihana ny fampiasana azy tsara kokoa.
1 Sarintany Mi Band: fitetezana ho an'ny Mi Band
2 Tetezana fampandrenesana
4 Fampandrenesana sy fanatanjahan-tena ho an'ny Mi Band
Sarintany Mi Band: fitetezana ho an'ny Mi Band
Fampiharana tsara ampiasaina amin'ny fehin-tànana, indrindra raha manana Xiaomi Mi Band 3 ianao, dia ity fampiharana ity. Iray ihany ny fiasan'ity, fa ny iray izay tena ilaina amin'ity lafiny ity. Mikarakara ny fampiharana tariho izahay amin'ny fotoana rehetra ampiasantsika ny Google Maps. Mba hahafahantsika mahazo fampandrenesana amin'ny fehin-tànana ary hahafahantsika mihetsika mora foana rehefa mampiasa ilay fampiharana isika. Tena mahazo aina amin'ity lafiny ity.
Izy io dia rindranasa mora ampiasaina izay mifanaraka amin'ny fotoana rehetra amin'ny lahasa izay nividianantsika azy. Ka mety ho safidy tsara io raha te hanana fidirana amin'ny Google Maps mivantana eo amin'ny fehin-tànanao ianao. Ny fampidinana anao dia manana vidiny 0,99 euro, izay zavatra mety tsy tian'ny mpampiasa sasany loatra.
Browser ho an'ny Mi Band 6/5/4/3, Amazfit Bip ary Cor
Mety ho an'ny mpampiasa maro ny fampandrenesana ao amin'ny Xiaomi Mi Band-ny dia tsy tian'izy ireo. Noho io antony io dia mitady safidy hafa izy ireo hahafahan'izy ireo mampandre fampandrenesana ahazoana aina kokoa sy mora ampiasaina kokoa. Izay avelan'ity rindranasa ity hamboarinay dia izy ireo mba hahafahan'izy ireo mahazo aina kokoa sy manitsy ny fampiasana ny bracelet. Tsy ho diso amin'ny fampandrenesana toy izao izahay rehefa mampiasa ilay rindranasa.
Maimaimpoana ny fampidinana azy. Misy dokam-barotra ao anatiny, saingy tsy misy fiatraikany amin'ny fomba hampiasantsika azy io. Ka fampiharana tsara dinihina. Indrindra raha tsy maharesy lahatra anao ny rafitra fampandrenesana ao amin'ny Xiaomi Mi Band. Mendrika ny omena azy io.
Tetezana fampandrenesana ho an'ny Amazfit & Mi Band
Fampiharana tena feno, izay mety tian'ireo mpampiasa manana Xiaomi Mi Band. Ny asany lehibe indrindra dia ny fahafahany soloina tanteraka amin'ny fehin-tànana i Xiaomi Mi Fit. Izy io dia manana andian-tsarimihetsika izay mahatonga ny mpampiasa handeha hiloka amin'ity rindranasa ity. Izy io dia rindrambaiko maivana, izay manaja ny tsiambaratelon'ny mpampiasa ihany koa. Izy io koa dia rindrambaiko novolavolaina tamin'ny loharano misokatra. Safidy tsara hodinihina.
Indrisy, ity app ity dia tsy azo sintonina avy amin'ny Google Play. Tokony hampiasa fivarotana fampiharana hafa izahay raha te hahazo azy. Azo atao ny misintona azy amin'ny GitHub amin'ny fomba tsotra, ity rohy. Izy io dia rindrambaiko tena maivana, noho izany dia sarotra ny maka habaka. Azo antoka fa hamela anao hampiasa tsara kokoa ho an'ny Xiaomi Mi Band, na inona na inona modely anananao. Maimaimpoana tanteraka ny fampidinana azy, araka ny azonao an-tsaina.
Fampandrenesana sy fanatanjahan-tena ho an'ny Mi Band
Farany ananantsika ity fampiharana hafa ity izay azo antoka fa tena ilaina amin'ny Xiaomi Mi Band. Hanome andiana fiasa fanampiny ho antsika izy io, izay hahafahantsika mampiasa tsara kokoa ny fehin-tànana. Noho izany, mety hiafara amin'ny fanoloana ny Mi Fit amin'ny fehin-tànana ianao. Ny safidy fanampiny hitantsika amin'ity fampiharana ity dia safidy sary. Azontsika atao ihany koa ny mampihetsika ny fo tsy tapaka amin'ny fo. Ka ny fampiasantsika azy io dia ahazoana aina kokoa.
Maimaimpoana ny fampiharana, na dia ao anatiny aza dia misy ny fanambarantsika. Saingy tsy manakana ny fampiasana azy ireo doka ireo. Tena ahazoana aina ampiasaina ary mendrika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tena ilaina hampiasaina amin'ny Xiaomi Mi Band
Miantso ny tenany ho amin'ny fanatanjahan-tena izy ireo ary tsy mitondra manao elanelam-potoana akory. Iza no namorona azy ireo?
Vovoka na dia ilay vavam-bary amazfit aza. Ny fampiharana default dia banga iray hafa.
Fanontaniana iray nahalasa adala ahy, misy fomba hanamboarana na hampidirako ny fampandrenesana farany ka rehefa hamelatra ny efijery ianao dia miseho nefa tsy mila mitady izany ao amin'ny fizarana fampandrenesana? Misy zavatra toa mila manao swipe a dimmis?
Samsung Mobile Design Fifaninanana 2019, ny fifaninanana izay hizarana 40 arivo dolara